हेलोवीन - एक रात दुष्ट को पूर्ण | Apg29
हेलोवीन हैं। हेलोवीन सबै मसीही कुनै एक भाग &#
को 1840s मा, मुख्य रूप आइरिस जब अमेरिका emigrated उहाँलाई यो सेल्टिक उत्सव गरे। अमेरिका, यो पनि मसीहीहरू, एउटा ठूलो भोज भएको छ र अक्टोबर 31 मा मनाइन्छ। अमेरिका बाट, यो केही वर्षसम्म "Americanized" छ, खोक्रो प्लास्टिक वा काठ मा pumpkins को "Skulls", चुडैल-सेट, कहालीलाग्दो मास्क, scythes, शैतानको काँटाहरू र Tombstones संग युरोप फर्के।
"त्यसैले तिनीहरूले मार्न कसरी, हजुरआमा, बुबा, भाइ बहिनी, मित्रहरूले भने भूत, skeletons र दुष्ट रूपमा मृत फर्केको जस्तो हुनेछ छ!"
हेलोवीन मान्छे टोली Celts बीच मुख्य रूप उत्पत्ति भएको एक पूर्व-मसीही मूर्तिपूजक घटना हो। यी पनि गलातीयामा (आधुनिक टर्की) देखि, एशिया माइनर देखि मूल थिए।
को Celts युरोपेली इतिहासको उल्लेख गरिएका छन्, 500 ई.पू. वरिपरि पहिलो पटक, जब एक माइग्रेसन युरोप को त्यसपछि उत्तरी भाग मा बस्ने पछि; को डेन्यूब र पश्चिमी जर्मनी आसपास क्षेत्र। युरोप मा, तिनीहरूले नाम "gaeler" वा "ग्रिड" द्वारा भयो।
हिंसात्मक विस्तार समय समयमा Celts आफ्नो क्षेत्र, पश्चिम बेल्जियम तिर र विशेष ब्रिटेन, विशेष गरी आयरल्याण्ड गर्न, दक्षिण इटाली र स्पेन र eastward एशिया माइनर, तिनीहरूले फेरि गलातीयामा बसे जहाँ विस्तार।
"Galates" को Celts लागि ग्रीक नाम पनि थियो। बिस्तारै, विशेष स्कटल्याण्ड, वेल्स र आयरल्याण्ड आएका Celts को घर रूपमा मानिन्छ गर्न। सेल्टिक धार्मिक चाडहरूमा, र जीवन सामान्य मा, occultism र druids (पुजारी-राजा) द्वारा शक्ति को व्यायाम मार्फत नेतृत्व थियो। बिरुवाहरु को अनुष्ठान बलिदान, अक्सर Mistletoe र पकाएको खाना, खुसीसाथ रोटी, साधारण तत्व थिए, तर पनि मानव बलिदान भयो (जसको कंकाल 1984 मा पत्ता थियो म्यान्चेस्टर, मा Lindow मानिस हेर्नुहोस्)।
जीवन र मृत्युको देवता Samhain
इङ्गल्याण्ड मा Stonehenge जादुई शक्ति को एक उच्च प्रभावकारी कलेक्टर हुन, "keltism" मा आधुनिक खोज्नेहरूको बीचमा मानिन्छ। यो हो जहाँ séances र अनुष्ठान उत्सव गर्न आधुनिक witches र shamans। को Celts खेति तिहार र नयाँ वर्ष 1 नोभेम्बर मनाइन्छ। यो मूर्तिपूजक पवित्र दिन थियो। पार्टी को गर्मी र यसरी मृत्यु र शरद ऋतु गाढा प्रकृति मा, नै जीवनको नयाँ सुरुवात चाहनुभएको जो प्रवेश अन्त चिन्ह लगाइयो। पृथ्वी मा, पतित पात मा, ताजा बल्ब sprouted।
वर्ष को यो समय मा संसारमा जीवित मान्छे र मृत दुनिया (incarnations बीच) बीच पर्दा Thinnest थियो, पनि चाहनुभएको। नयाँ वर्ष, यो "पवित्र साँझ" अघि साँझ भएको "Hallow हव्वालाई", अर्थात् अक्टोबर 31, जब तिनीहरूले विचार थियो कि मरे, जो गत वर्ष समयमा मृत्यु, र अरु, असल र खराब शक्ती र आत्माको दुवै कम्तिमा ती - फर्के पृथ्वी जीवन र मृत्युको देवता (प्रकाश र अँध्यारो) Samhain को व्यवस्थापन अन्तर्गत। उहाँले ब्रह्माण्ड मा र underworld दुवै शासन गरे।
31 अक्टोबर त्यसैले सबै जीवित र मृत साँझ दुवै थियो। यो पनि "पुर्खा रात," "Anfädernas रात" वा "पुर्खाहरूको 'रात" भनिन्छ।
सेतो र कालो जादू संग एक बैठक
मरेका र अन्य शक्ती र आत्माको, यो साँझ धरती आउँदा, एक हात मा, तिनीहरूले, स्वागत थिए जहाँ तिनीहरूलाई पहिचान गर्ने ठाउँमा गरे कि राम्रो लागि मोमबत्ती र bonfires रोशनी तिनीहरूलाई शान्त गर्नु थिए तिनीहरूलाई जस्तो गर्न, र अन्य मा शिकारीहरु भ्रममा र एकैचोटि तिनीहरूलाई फिर्ता तर्साउन, तिनीहरूलाई भन्दा झन् खराब हेर्न र घर सुन्दर राख्न।
प्रकाश, आगो, रगत, मृत्यु र अन्धकारको प्रतीक मिश्रित थिए। सेतो र कालो जादू कालो जादू को किनारा भेटे थिए। Druids यस्तो दुष्ट witches उडान आएका खतरनाक प्राणीहरू तर्साउन ठूलो bonfires रोशनी। मान्छे बाहिर घरेलू आफ्नै आगो राख्न र सट्टा आफूलाई सुरक्षित गर्न Druids आगो द्वारा नयाँ आगो डाउनलोड सोधियो।
वा यो साँझ / रात मृत्यु गर्नेहरूलाई को प्राण, डाउनलोड पनि लागि मानव बलिदान आवश्यक - आत्माको संसारमा आए गर्नेहरूलाई, दुवै नयाँ वर्षको लागि उपहार, उदाहरणका लागि, ज्योति को आउँदै वर्ष मा गिरावट र जाडो र राम्रो प्रजनन पछि प्रतिफलको प्रतिज्ञा दिन सक्छ नयाँ वर्ष। यो लाभ वा curses फिक्री।
यहाँ केही समकालीन छोराछोरीको मुद्दाहरू आधार सबै संन्यासी दिन अघि रात ढोकामा छ: "ट्रिक-वा-व्यवहार" ( "Spratt वा उपहार") "कैंडी वा बस।" Samhain दिने र तीतो काट्ने दुवै भन्नुभयो भइरहेको थियो। त्यसैले यसलाई आदर गर्न अपेक्षा गरिएको थियो। सबै संन्यासी दिन को मसीही चर्च गरेको भोजमा, को मूर्तिपूजक सेल्टिक खेति तिहार भन्दा विजय गर्न उठ्दा।
र एक प्रारम्भिक आइरिस मसीही अनुकूलन मरेका आफन्त को प्राण लागि प्रार्थना रोटी को घरहरू मा लागि माग्छु, र बदलामा गर्न, थियो। पनि मूर्तिपूजक पवित्र बगैंचाहरु र उच्च स्थानहरू तल कटौती र मसीही चर्च र cemeteries प्रतिस्थापन गरिएको थियो - - कि "सबै जीवित र मृत रात," को मूर्तिपूजक विचार, माथि थियो, केही त कदम अन्ततः एक भ्रम, सायद एक तन्त्रमन्त्रमा जवाफ "förkristnandet" थियो "Allahelgonaafton", अर्को शब्दमा हेलोवीन मा।
अमेरिका देखि फिर्ता
को 1840s मा, मुख्य रूप आइरिस जब अमेरिका emigrated उहाँलाई यो सेल्टिक उत्सव गरे। अमेरिका, यो पनि मसीहीहरू, एउटा ठूलो भोज भएको छ र अक्टोबर 31 मा मनाइन्छ। अमेरिका बाट, यो केही वर्षसम्म "Americanized" छ, प्लास्टिक वा काठ मा खोक्रो pumpkins को *, चुडैल-सेट, कहालीलाग्दो मास्क, scythes, शैतानको काँटाहरू "Skulls" र Tombstones संग युरोप फर्के।
केही डाटा सुझाव 1991 स्वीडेन मा शुरू थाले रूपमा Jokes एउटा कम्पनी थियो। एक खाद्य श्रृंखला केही वर्ष पहिले देखि एक उड्ने थियो: "त्यसैले वास्तविक हेलोवीन पार्टी आफ्नो spökkompisar र शैतानको मित्र भेला र दुष्ट को पूर्ण एक रात को लागि तयार।"
ताकि छ तिनीहरूले मार्न कसरी, हजुरआमा, बुबा, भाइ बहिनी, मित्रहरूले भने भूत, skeletons र दुष्ट रूपमा मृत फर्केको जस्तो हुनेछ! किन लुगा यसलाई तपाईं मृत्यु जसले नातेदार र साथीहरू अनुकरण गर्न चाहनुहुन्छ भने, थप occultism मा तथाकथित राम्रो आत्माको र "स्वर्गदूतहरू" जस्तै त गर्छ - र अहिले फिर्ता जा मतलब?
स्पष्ट कुनै पनि बिना सबैभन्दा Swedes बस एक निर्दोष खेल, को लागि हेलोवीन उत्सव यो कुरा अरू पछि हुनेछ भन्ने लाग्यो। तर र यो असहज छ गाढा किन हाइलाइट गर्न पर्छ? डराने को निहित फिक्री हिज्जे छ?
अर्डर वास्तविक मृत्यु अघि जिम्मेवारी टाढा प्राप्त गर्न मृत्यु मानिस ठट्टा? हेलोवीन वास्तविकता देखि एक आवश्यक उम्कने देखेको हुनुपर्छ? हो, हेलोवीन थप केही कुनै एक भाग हुनुपर्छ भन्ने पुरानो मूर्तिपूजक अनुकूलन, सबै मसीही को कम से कम भन्दा छ। मृत्यु र दुष्ट महिमा छ।
स्कूलमा, बच्चाहरु हिंसा त्याग्न सिक्न। र यो बच्चाहरु सुरक्षा बारे धेरै बोल्छ, सबै को पहिलो बच्चाको सर्वोत्तम हित सोच्न। यो मानवतावाद र विद्यालयमा मृत्यु र हिंसा प्रतीक यी छोराछोरी, मिडिया र समाजमा सामान्य मा एकै समयमा प्रस्ताव स्वतन्त्रता को नाम। डबल स्तर र naivety, म भन्न! कसरी ठूलो लामो र गाढा शरद ऋतु को समयमा यहाँ स्वीडेन मा भन्दा एक पार्टीको लागि हाम्रो आवश्यकता हो, हेलोवीन एक राम्रो उदाहरण हो!
आत्मा संसारमा र यो मूर्तिपूजक बाल-विरोधी साँझ मा सार्वजनिक बहस मा मसीहीको रूपमा कृपया, चिनो। तर मसीही मा costumed बच्चाहरु खेल्दै गर्दा बुद्धिमानीपूर्वक प्रतिक्रिया। भन्छन्, उदाहरणका लागि, दयालु, कि तपाईं हेलोवीन मनाउन छैन। यो सामान्यतया वास्तवमा हुन गर्दैन भन्दा कठिन। "मसीहीहरूले" हेलोवीन गर्न प्रयास, म मतलब अर्कोतर्फ, जाने गलत तरिका हो।
* एक आइरिस लिजेन्ड अनुसार, त्यहाँ ज्याक नामको दुष्ट लोहार थियो। ज्याक शैतानको tricked र उसलाई आफ्नो प्राण कहिल्यै दावी गर्न प्रतिज्ञा गर्नुभयो। उहाँले अन्तमा मृत्यु हुँदा, उहाँले पृथ्वीमा धेरै कारण किनभने स्वर्गमा मा प्रवेश अस्वीकार गरियो। त्यसपछि उहाँले पनि शैतानको अन्त संग सक्छ, उहाँले पृथ्वीमा भटक प्राण रह्यो। उहाँले कम्तीमा एक लालटिन प्राप्त दियाबलले सोधे। शैतानको ला जब खोक्रो सलगम ज्याक एउटा सानो आगोको खाए। तब देखि उहाँले आफ्नो "लालटिन" र रहन ठाउँ लागि देख संग restlessly वरिपरि Wanders। खेल र लोकगीत विशेष संग दुष्टात्मा तर्साउन टाढा गर्न खेलकुद, "ज्याक लालटिन" को लागि एक यस्तो दीपक भनिन्छ।